Pet kilalao Factory |China Pet kilalao Manufacturers, mpamatsy
Ambongadiny kely miforitra biby fiompy kilalao miforitra manidina kilalao Interactive Pet alika milalao kilalao manidina Disc
Kilalao fanofanana an-kalamanjana: Ity kilalao kapila alika ity dia natao ho fitaovana hanofanana ny alika anatiny na ivelany ary ity kilalao alika ity dia manintona ny sain'ny biby fiompinao, manampy ny faharanitan-tsain'ny biby fiompy ary mety hampiofanana alika.
Famoronana famoronana: Ireo frisbees alika malefaka ireo dia natao ho an'ny sidina lavitr'ezaka mandritra ny ora maro hisintonana sy hisintonana fahafinaretana ary rehefa mangetaheta ny alikanao dia azonao atao ny mamadika azy ary mampiasa azy ho lovia fisotroana.
Pet Catnip Molar Teeth Cleaning Fish Shape Training Interactive Kilalao ho an'ny Silicone Cat Chew kilalao
MATERIAL SAFE: Ny kilalao catnip vita amin'ny fingotra voajanahary avo lenta.Toy ny kilalao mitsako sy nohavaozina vao haingana, mateza kokoa tsy ho rava mora foana.
Kilalaon'ny saka salama: loaka mifoka rivotra maro eo amin'ny andaniny roa, mampiseho ny fofon'ny catnip, manintona ny saka hilalao.Manampy amin'ny fomba mahomby ny sakanao hitsako / hanadio ny nify ary manampy amin'ny fitomboan'ny saka.
Taolana vaovao miendrika fanadiovana nify alika kilalao Pet Silicone borosy nify mitsako kilalao
Teboka borosy nify multifunctional sy multipurpose: Ny borosy nify alika izay tsy azonao apetraka dia mahatonga ny alika tsy handà ny fakam-panahin'ny kilalao.Ny borosy nify fanadiovana ny nifin'ny alika dia afaka miaro ny fahasalaman'ny vavan'ny alika, manadio nify, ary mahatonga ny alika ho madio, madio ary salama.